Pilot Vecihi Hürkuş miala amin'ny fiaramanidina novokarina tao amin'ny studio-ny tenany any Ankara dia nahavita nanao fitsangatsanganana kely tany Tiorkia. Tamin'ny 1932, Selahattin Reşit Bey sy ny ekipany, milina sy mpamatsy fitaovan'ny injeniera izay nampiofana an'i Cemiyet tany ivelany. [More ...]
Orinasa iray antsoina hoe Ottoman Railway avy any Izmir mankany Aydin naorinny vondrona anglisy izay nahazo ny fandresen-dahatra izzir-Aydin tamin'ny 28 Mey 1857.
Mampitandrina anao i Pirelli goavambe avy any Tyro mba hanamarina ny kodiaranao alohan'ny hanombohanao soa aman-tsara raha tsy nifindra ela ny fiaranao. Azonao atao ny manao fisavana vitsivitsy, fa ny sasany amin'ireto [More ...]
Ny fiaramanidina fiaramanidina an'ny Airbus A400M dia nanao dingana lehibe tamin'ny alàlan'ny fahazoana taratasy fanamarinana fiaramanidina fiaramanidina ambany lenta ary nahavita fahombiazana vaovao tamin'ny alàlan'ny fanolorana endrika tokana ao amin'ny kilasy fiaramanidina fitaterana miaramila. [More ...]
Raha ny angon-drakitra tamin'ny bisikileta dia voangona hatramin'ny 2000 ka hatramin'ny 2019, dia hita fa nisy bisikileta manodidina ny 1 miliara eran-tany. Raha tsy misy tarehimarika tena izy dia saika antsasaky (450 tapitrisa) ny bisikileta no any Sina [More ...]
French Renault dia andrasana handao ny mpiasa 5.000 mba hamonjy vola roa miliara. Araka ny vaovao navoakan'ny gazety frantsay Le Figaro, toy ny ataon'ny orinasa marobe, fa tsy ny fahazoan-dalana karama ho an'ny mpiasa ao aminy [More ...]
Manohana ny orinasa hanohana ireo marika mpampiasa sy manome lanja ny kolontsaina orinasa ny The Great Place to Work Institute. Raha ny antontan-kevitry ny Institut, ny orinasa manana kolontsaina matoky dia avo telo heny ny fiverenany ara-toe-karena raha oharina amin'ireo mpifaninana aminy. [More ...]
Raha mitohy ny vaksiny sy ny fandinihana zava-mahadomelina dia mitohy amin'ny hafainganam-pandeha amin'ny otrikaretina corona (COVID 5,5), izay niantraika an'izao tontolo izao ary nampitaina ho an'ny olona 19 tapitrisa hatramin'izao, ny mpahay siansa dia efa [More ...]
ARUS, izay misolo tena ny sehatry ny Rail System dia manohy miasa amin'ny tetikasan'ny COSME EU. Ny ekipa misolo tena ny fihaonana amin'ny fampiharana an'ny Microsoft any Tiorkia izay avy tany Espaina ary koa ny arika RAILGRUP, MAFEX avy any Danecec dia ny DITECF avy any Italia, France [More ...]
Tany Bursa, ny lalana izay tsy nitazomana nandritra ny taona maro noho ny fitohanan'ny fifamoivoizana dia nahatratra fampiononana noho ny fantsom-pandehanana. Miaraka amin'ny asa tsy vita afa-tsy amin'ny curfews, lalana kilometatra 28 kilometatra mandraka ankehitriny, asfaltara mitentina 80 taonina [More ...]
Nanararaotra ny làlana farany, ny IMM dia nanohy ny fikojakojana ny lalana, ny fanamboarana ary ny fanavaozana asphalt amin'ny famaky amin'ny andaniny roa amin'ny tanàna. Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, fantatry ny besinimaro ho "lalan'ny fahafatesana" [More ...]
Izmir Metropolitan Municipality dia nanomboka ny famonoana otrik'aretina tao amin'ny moske izay haverina indray ny zoma hifanaraka amin'ny boriborin'ny Ministeran'ny atitany. Mifanaraka amin'ny boriboritany ny ministeran'ny raharaha anatiny ao amin'ny kaominina Izmir Metropolitan, ireo moske havaozina hamerina ny fotoam-pivavahana amin'ny zoma 29 Mey. [More ...]
Ny fiaramanidina mpiady F-16 Miady amin'ny Falcon an'ny tafika Tiorka an'habakabaka Tiorka dia nahatratra ny tratran'ny mpampihorohoro tany amin'ny faritra Asos any avaratr'i Irak. Tao anatin'ny fanambarana nataon'ny Ministeran'ny Fiarovam-pirenena momba ny Repoblika, ny tafika Tiorka [More ...]
Ny Vaomieran'ny Fikarohana momba ny siansa sy teknolojia any Torkia, Ivontoerana mpikaroka momba ny teknolojia momba ny fiarovana sy fampahalalana miraikitra amin'ny Ivotoerana fikarohana momba ny teknolojia lalindalina, hiasa amin'ny olona 60 hiasa. Fepetra takiana amin'ny fampiharana [More ...]
Hafatra 13 tapitrisa 2 684 390 an'ny mpampiasa 9 tapitrisa 801 240 dia voavaly miaraka amin'ny Mpanampy EBA nanomboka ny 82,7 aprily. XNUMX an'ny mpampiasa dia EBA ao anatin'ilay rafitra miaraka amin'ny fahaiza-miaina voajanahary novokarin'ireo injeniera Tiorka. [More ...]
Minisitry ny Fambolena sy ny Ala Bekir Pakdemirli, araka ny renirano Tigris ary nanao lakolosy vita amina betaka vita tamin'io karazana hazo io tany Torkia sy ny famokarana angovo lehibe indrindra ao Eropa mba hanomboka hilazana an'i Cetin Dam [More ...]
Vokatry ny fahitana, fanaraha-maso, hetsika fanenjehana sy ny fitazonana nataon'ny vondron-tsaintsika mavitrika amin'ny toetr'andro rehetra sy ny taniny, 24 ora isan'andro, andro aman'alina, dia nanjary ampahany manan-danja amin'ny loharanom-bolan'ny fikambanana mpampihorohoro. [More ...]
Ny minisitry ny varotra Ruhsar Pekcan dia nanambara fa nampiditra ny mpikambana ao amin'ny orinasa ho any amin'ny tranokalan'ny e-varotra, fandraisana anjara amin'ny delegasiona varotra virtoaly sy ny virtoaly virtoaly, ary ny fikarakarana ny virtoaly virtoaly. Fanapahan-kevitry ny filoham-pirenena manohana ny hetsika nomerika amin'ny fidirana amin'ny tsena [More ...]
Zehra Zümrüt Selçuk, Minisitry ny Fianakaviana, ny Asa ary ny Serivisy ara-tsosialy, dia nilaza fa 6 olona manana aretina mitaiza mafy no omena fanampiana ara-bola tsy tapaka, ary 564 2 135 izay miankina amin'ny fitaovana noho ny aretina mitaiza. [More ...]
Minisitra Selçuk: 'Manomana ny antontan-taratasim-pifandraisana nasionaly ho an'ny fanoloran-tena ho an'ny fianakaviana izahay; Ny minisitry ny fianakaviana sy ny asa ary ny asa sosialy Zehra Zümrüt Selçuk dia nanambara fa hampiditra rafitra iray izay ny antontan-taratasy momba ny fahaizana nasionaly ho takiana amin'ny torohevitra momba ny fianakaviana. Family [More ...]
eo ambanin'ny fitarihan'ny fipoahan'ny karazana coronavirus vaovao mandritra ny firenena dia nanoherana ny herisetra an-trano sy ny vehivavy manerana an'izao tontolo izao mba hampihenana ny hetsika any Tiorkia. Mitranga ao anatin'ny 4 volana amin'ity taona ity [More ...]
Nijanona ny sidina YHT i TCDD Tasimacilik tamin'ny volana martsa taorian'ny noferana ny fitsangantsanganana fifampisarahana tamin'ny ady amin'ny valan'aretina coronavirus. Hanomboka ny alakamisy 28 may izao ny sidina. Araka ny vaovao nataon'i Olcay Aydilek avy ao Habertürk; "Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, [More ...]
Tamin'ny herinandro lasa teo… Nihaona tamin'ny asa fanamboarana tampoka ny mpamily nampiasa ny lalana Ring. Ity no asa natao hamita ilay fizarana afovoan'ny arabe tsy hita tao amin'ilay toerana, izay hamindra ny làlamby hafainganam-pandeha haingam-pandeha avy any Village onağlayan eo amin'ny làlan-drindrina ho an'ny làlan'ny Oxygen Plants. Betsaka tokoa… Ny tontolo iainana noho ny asa nanomboka tamin'ny famotsiam-bolan'ny afovoany [More ...]
Ny tanànan'ny ala maharitra dia hamokatra ny sakafo sy ny angovo ilainy amin'ny fantsom-pokontany solar sy ny fehikibon'ny faritra fambolena hametraka manodidina azy. Ny orinasa marisika italiana Stefano Boeri Architetti dia marani-tsaina sy maharitra ao Cancun, Mexico [More ...]